umatrasi wegwebu - Rayson
Ukho kwindawo efanelekileyo umatrasi wegwebu.Okwangoku sele uyazi ukuba, nantoni na oyikhangelayo, uqinisekile ukuyifumana Rayson.siqinisekisa ukuba ilapha Rayson.
URayson uyilwe ngocoselelo. Imigaqo ebandakanya ibhalansi, umlinganiso, ugxininiso, isingqisho kunye nemvisiswano zizikhokelo ezilandelwa ngabaqambi xa kuyilwa le mveliso..
Sijonge ukubonelela ngomgangatho ophezulu umatrasi wegwebu.kubathengi bethu bexesha elide kwaye siya kusebenzisana ngokubonakalayo nabathengi bethu ukubonelela ngezisombululo ezifanelekileyo kunye neendleko zeendleko.
I-Rayson kwi-Rayson Zone Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Iimveliso eziphambili Ukuphakanyiswa kwexabiso elifanelekileyo lencwadi yelaphu elingenisiweyo kwimveliso yebhokisi. Ukunyusa ixabiso elifanelekileyo leendwangu ezifakwe ngaphakathi kwibhokisi Ukulawulwa komgangatho weRayson kwenziwa ngokungqongqo kwinqanaba ngalinye lenkqubo yokuvelisa, ngakumbi ukukhethwa kwezinto ze-elastomer. Uluhlu olubanzi lweemvavanyo zentsebenzo zeRayson lwenziwe. Luvavanyo lwe-bacterial, uvavanyo lwe-abrasion, ubumanzi, ukuthamba, kunye novavanyo lwamandla. Ukunyusa ixabiso elifanelekileyo lendwangu yangaphakathi ebhokisini Imveliso inika amandla amakhulu. Yenziwe ngezinto eziqine kakhulu kunye nezinto zayo, inokuma imozulu embi, ukungcangcazela, ukugungqa, kunye nokudumba.